Dagaalka Itoobiya oo dhulka la galay dhaqaalihii Jabuuti | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dagaalka Itoobiya oo dhulka la galay dhaqaalihii Jabuuti
Dagaalka Itoobiya oo dhulka la galay dhaqaalihii Jabuuti
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa walaac xoogan ka muujisay dagaalka ka socdo dalka Itoobiya, kaas oo saamayn weyn ku yeeshay horumarkii dhaqaale ee ka jiray dalkaasi Jabuuti.
Wasiirka Maaliyadda Jabuuti, Ilyaas Muuse Dawale ayaa walaac ka muujiyay inuu meesha ka baxo horumarka dhaqaale ee labaatankii sano ee ugu dambeysay ay Jabuuti sameynaysay.
Wasiirka ayaa sheegay in laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay ay Jamhuuriyadda Jabuuti khasaartay lacag u dhiganta laba bar hantida qaranka, oo u dhiganta hal dhibic toddobo milyan oo dollar ($1.7B), ka dib markii uu hoos u dhacay dakhligii iyo shaqooyinkii dalkaasi.
“Hadda waxa welwelka nagu hayo ayaa wuxuu yahay horumarkii adkaa ee aan labaatanka sano ka fulinay gobolka, gaar ahaan Itoobiya illaa iyo Jabuuti oo su’aal galay. Anaga oo aan qayb ka ahayn colaadaasi, waana sababta Madaxweynahayagu uu mar kasta ugu celceliyo nabad, nabad, nabad. Gobolku ma awoodo waxa ka socdo oo aan hadda arkayno ee Itoobiya ka dhacaya.” Ayuu yiri Wasiirka oo BBC la hadlay.
Wasiirka ayaa yiri “Jabuuti, dagaal ma awooddo oo waa dal yar oo shacab hal milyan ah ay ku nool yihiin, oo caqabado badan-na la kufaa-dhacaya. Marka ma’aha in ay dadku culeys kale oo aan loo baahnayn na saaraan, iyadoo caqabaduhuna ay taagan yihiin.”
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan ku duceysanaynaa inuu dagaalkani degdeg ku soo dhamamado, maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo aanan ahayn in aanu is dagaalno, oo aan samayn karno.”
Kala bar dakhliga guud ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka soo xaroon jiray canshuuraha ay ka qaaddo badeecadaha dalka Itoobiya uga soo degga Dekedda Jabuuti, taa oo hoos u dhaca ku yimid laga dareemay waddada laamiga iyo khadka tareenka ee isku xira labada dal, tan iyo intii uu dagaalku ka bilowday waqooyiga Itoobiya.
Labada dal ayaa horaan ballaayiin dollar ku maalgeliyay marinka ganacsi, ee ay ka hirgeliyeen waddada isku xirta labadaas dalka.
Hadalka Wasiir Dawale ayaa imaanaya, xilli uu sii kordhayo dareenka dalalka deriska ka qabaan inuu saamayn weyn ku yeesho dagaalka dalkaasi, ay boqolka iyo tobanka milyan ee qof ku nool yihiin.
Antonio Guterres, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa mar sii horeysay ku baaqay in si degdeg ahi loo joojiyo colaadaasi, isagoona ka digay in xasilloonida Itoobiya ay muhiim u tahay guud ahaan Geeska Afrika.
Previous articleGalmudug oo 3 maalmood ku iclaamineysa doorashadii ugu horeysay ee Golaha Shacabka
Next articleGuddiga Doorashooyinka oo kulan ka leh kursiga uu baneeyay Senator Dhagey